आयातित औलोका बिरामीले उन्मूलनमा समस्या
काठमाडौं, वैशाख १५ गते । नेपालमा दशकौँ अघि औंलो उन्मूलन भएको भनिए पनि अझै यो चुनौतीबाट मुक्त छैन । आयातित औंलोले निरन्तर चुनौती थपिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयातित औलोका बिरामी ६३६ जना पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भन्दा २०७३/७४ मा आयातित औलोका बिरामी झन्डै एकतिहाइले बढेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४८५ जनालाई मात्र देखिएको थियो ।
महाशाखाका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले आयातित औलो बढ्नुमा विदेशमा काम गएर आएका कामदार प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतसँंग खुला सिमाना भएको कारणले पनि आयातित औलोका बिरामीहरू बढेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ म २५६ जना औंलोका बिरामी रहेका छन् ।
महाशाखा प्रमुख सेन्चुरीले सरकारको लक्ष्य अनुसार सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई औलो मुक्त बनाउने रणनीति अपनाएको छ । डा. सेन्चुरीले औलो रोग सङ्क्रमित एनोफिलिज जातका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हँुदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै औलो रोकथामको सर्वोत्तम उपाय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले लामखुट्टेले टोेकेपछि १० देखि १५ दिनभित्रमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वान्ता हुने, जोर्नीहरू दुख्ने, असजिलो महसुस हुनेजस्ता सामान्य लक्षण देखा पर्ने, दिन बिराएर ज्वरो आउने, शरीरका भित्री अङ्गहरू सुन्निने, रगतको मात्रा कमी हुने तथा परजीवीको प्रकृतिअनुसार विभिन्न लक्षण देखापर्ने जानकारी दिनुभयो ।